हाँसोले घटाउँछ तनाव – Health Post Nepal
२०७५ भदौ १९ गते १५:०६
तस्वीर : Andbeyond.com
तनावको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसारमा गम्भीरखालका रोगीको संख्या थपिँदै गएको छ । तनावलाई नियमित प्रक्रिया सम्झेर मानिसहरू ‘तनाव छ’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । तर, तनावका कारण नै अल्सरदेखि क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगसम्म निम्तिनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय बढ्दोक्रममा रहेका उच्चरक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्काघात, पक्षघातलगायत रोगको प्रमुख कारण तनाव हो । तनाव घटाउनु वा हटाउनु भनेको जीवनमा खुसी थप्नु हो । कसरी घटाउन सकिन्छ त तनाव ?
चिकित्सकहरू तनाव कम गर्न सकेसम्म हाँस्ने अवसर नछोड्न सुझाउँछन् । मनबाट प्राकृतिक हाँसो नसिस्किने अवस्थामा पनि कृत्रिमै भए पनि हाहा गरेर हाँस्न खोज्दा बिस्तारै शरीरमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव छोड्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
उच्चरक्तचाप, मुटु, मधुमेहजस्ता दीर्घरोगका बिरामीलाई दैनिक कम्तीमा १० पटक धक फुकाएर हाँस्ने वातावरण सिर्जना गर्न चिकित्सकको सल्लाह छ ।
चिकित्सकका अनुसार रमाउन सक्ने, हाँस्न सक्ने र जीवनलाई सकारात्मक रूपले लिने मानिसलाई डर, रिस, चिन्ताजस्ता समस्याले प्रायः सताउँदैनन् । हाँसोले भरिएको दैनिकी मानसिक रूपमा आनन्ददायी हुने मात्र होइन, शारीरिक रूपमा स्वस्थकरसमेत हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । उच्चरक्तचाप, मुटु, मधुमेहजस्ता दीर्घरोगका बिरामीलाई दैनिक कम्तीमा १० पटक धक फुकाएर हाँस्ने वातावरण सिर्जना गर्न चिकित्सकको सल्लाह छ ।
जर्नल अफ होलेस्टिक नर्सिङमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार शल्यक्रियापछि दिइने पेनकिलरभन्दा हाँसो छुट्ने वाक्य पाएका बिरामीले कम दुखाइ महसुस गर्छन् । दिनमा १० पटक हाँस्ने मान्छे स्वस्थ र जवान पनि देखिनेसमेत जर्नलमा उल्लेख छ ।
लोमा लिन्डा विश्वविद्यालय क्यालिफोर्नियाका डा. ली बर्क र उनका अनुसन्धान सहयोगी डा. स्टान ली टानले गरेको अनुसन्धानले पनि हाँसोबाट शरीरको प्रतिरक्षात्मक प्रणालीमा धेरै सकारात्मक फाइदा पुग्ने पुष्टि भएको देखाएको छ ।
हाँसोका कारण उत्पन्न हुने हर्मोनकै कारण बिरामीले स्वस्थ भएको महसुस गर्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार उन्मुक्त हाँसोले स्वस्थ र सकारात्मक आवेग ल्याउँछ । हसाउने र हाँस्ने क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली बढी गतिशील हुन्छ ।
‘हाँसोले रक्तचाप र तनाव बढाउने हर्मोनलाई घटाउँछ, रोगको संक्रमणसँग लड्ने टी नामक रक्तकोषिकाको वृद्धि गराउनुका साथै रोगसँग लड्ने गामा इन्टरफेरन तथा बिटा कोषिकाजस्ता प्रोटिन बढाउँछ,’ सो अध्ययनमा भनिएको छ, ‘हाँसोले शरीरभित्रैबाट निस्कने प्राकृतिक दुखाइ कम गर्ने रस निकाल्न बल दिन्छ ।’
हाँसोले रक्तकोषिकालाई साँघुरो बनाउने र संक्रमण रोक्ने गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने तथा तनावप्रदायक हर्मोनलाई घटाउने काम गर्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार हाँसो एकप्रकारको शारीरिक कसरत हो । यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन छाती र मांसपेशीबीचको भागको व्यायाममा सघाउँछ । चर्को आवाज निकालेर हाँस्दा फोक्सो, दिमाग, रक्तचाप र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि सहयोग पुग्छ ।
यसरी घट्छ तनाव
– फलो गर्न सकिनेकिसिमले नियमित कामको तालिका बनाउने र अनुसरण गर्ने ।
– सकेसम्म सकारात्मक सोच राख्ने र हरेक कुरालाई सकारात्मक कोणबाट हेर्ने ।
– नराम्रा घटना, र क्षणहरूलाई मनमा नराख्ने, सम्झिनरहने ।
– कुनै पनि अवस्थालाई स्वीकार गर्ने र समस्याको सम्भव हुने समाधान खोज्ने ।
– अर्काको काम बिगार्ने सोच राखेर नहिँड्ने ।
– प्रतिशोधको भावना छोड्ने ।